ခန္ဓာကိုယ် ဖွဲ့ဖြိုးမှု သာမန်ထတ်နှေးကွေးပေမယ့် ဆယ်တန်းကို ဂုဏ်ထူး နဲ့ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်သွားတဲ့ မောင်ခေတ်မင်းသန့် – Let Pan Daily
ကိုယ်ခန္ဓာ ကြီးထွားမှု လျော့နည်းပြီး၊ ခန္ဓာကိုယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်း သာမန်ထက် နှေးကွေးရနေရသူ ၊ ပုသိမ်မြို့က မောင်ခေတ်မင်းသန့် က ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာ သင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲတွင် မြန်မာဘာသာ ဂုဏ်ထူးဖြင့် ထူးချွန်စွာ အောင်မြင် ခဲ့ပါတယ်။
မောင်ခေတ်မင်းသန့် ဟာ ကြီးထွား ဟိုမုန်း ချို့တဲ့သည့် ဝေဒနာကို ခံစားနေရပြီး .. လက်ရှိမှာ အသက် (၁၇) နှစ် ရှိပြီ လို့ သိရပါတယ်။
အခုလိုအဆုံးထိ ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျွန်တော် တို့ Page မှ အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နော်…နောက်များမှာလည်း အခုလိုဆယ်လီ တို့ရဲ့ သတင်းများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအုံးနော်….
ခန်ဓာကိုယျ ဖှဲ့ဖွိုးမှု သာမနျထတျနှေးကှေးပမေယျ့ ဆယျတနျးကို ဂုဏျထူး နဲ့ ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျသှားတဲ့ မောငျခတျေမငျးသနျ့
ကိုယျခန်ဓာ ကွီးထှားမှု လြော့နညျးပွီး၊ ခန်ဓာကိုယျ ဖှံ့ဖွိုးမှုနှုနျး သာမနျထကျ နှေးကှေးရနရေသူ ၊ ပုသိမျမွို့က မောငျခတျေမငျးသနျ့ က ၂၀၁၉ -၂၀၂၀ ပညာ သငျနှဈ တက်ကသိုလျဝငျတနျး စာမေးပှဲတှငျ မွနျမာဘာသာ ဂုဏျထူးဖွငျ့ ထူးခြှနျစှာ အောငျမွငျ ခဲ့ပါတယျ။
မောငျခတျေမငျးသနျ့ ဟာ ကွီးထှား ဟိုမုနျး ခြို့တဲ့သညျ့ ဝဒေနာကို ခံစားနရေပွီး .. လကျရှိမှာ အသကျ (၁၇) နှဈ ရှိပွီ လို့ သိရပါတယျ။
အခုလိုအဆုံးထိ ဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျော တို့ Page မှ အထူးပငျကြေးဇူးတငျရှိပါတယျနျော…နောကျမြားမှာလညျး အခုလိုဆယျလီ တို့ရဲ့ သတငျးမြားနှငျ့ ပွညျတှငျးပွညျပသတငျးမြားကို အခြိနျနှငျ့တပွေးညီ တငျဆကျပေးမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျကြှနျတျောတို့ Page လေးကို Like & See First လေးလုပျပေးသှားကွပါအုံးနျော….
သားသမီး (၄)ယောက်လုံး မျက်မမြင် ဖြစ်နေပြီး အိမ်ပေါ်က နှင်ချခံခဲ့ရတဲ့ မိသားစုလေး အတွက် မြေကွက်ဝယ်ပေးပြီး အိမ်ဆောက်ပေးတော့မည့် အလှူရှင်
ထီထိုးတဲ့ သူတိုင်း သိထားဖို့… ထီလက်မှတ် တစ်ဆောင် ကို ထီ (၂)ခါ ပေါက်နိုင်တယ် ဆိုတာ (၁၀ စောင်တွဲ အခါ ၂၀ ပေါက်)
မြန်မာ တောင်သူတွေ မကြာမှီ ရင်ဆိုင် ရဦးမည့် ကျိုင်းကောင် အန္တရာယ်